Tsvangirai: Zanu-PF Iri Kuvhiringidza Kushanda kweHurumende yeMubatanidzwa
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, vanoti Zanu-PF yave kukanganisa zvinhu muhurumende yemubatanidzwa nekukweva makumbo kwairi kuita panyaya yekugadzirisa zviri kunetsa uye kukonzeresa kwairi kuita mhirizhonga munyika.
Vachitaura neChipiri manheru paJameson Hotel muHarare, VaTsvangirai vakati mhirizhonga iri kuitika munyika, zvikuru kuMbare, iri kukonzerwa nevatsigiri veZanu-PF. Vakatiwo vamwe vakuru vemauto, mapurisa nevasori, havana kushanduka maitiro avo, uye vari kuramba vachirerekera kubato reZanu-PF, izvo zvava kupa kuti vapedzisire voshungurudza vatsigiri veMDC.
VaTsvangirai vakashorawo mapepanhu ehurumende vachiti ave kukurudzira ruvengo muvanhu, uye kuti mapepanhau aya anogona kukonzeresa kuti vanhu vagume vopondana nekureva nhema.
Vakatiwo Zimbabwe inofanirwa kudzidza kubva kune zviri kuitika kuEgypt neTunisia, zvekuti vanhu vanogona kutsikirirwa kwenguva yakareba, asi vachizoguma voti zvakwana. Asi vakati hurumende yemubatanidzwa inogona kumisa izvi kana ikavandudza zvinhu zvakawanda zviri kuvhiringa budiriro.
VaTsvangirai vakatiwo zviri pachena kuti hupenyu hwevanhu hwakashanduka kubva pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa.
Vakati izvi zvakakonzerwa nekuti MDC yakanga yava muhurumende iyi. Vakatiwo zvakakosha kuti mapato ose ashandire pamwe chete, kwete kuita makwikwi muhurumende, sezviri kuitwa neZanu-PF. Vakati Zanu-PF ine chinangwa chimwe chete, chekurambira pachigaro chemasimba.
VaTsvangirai vakti kukundikana kweZanu-PF kugadzirisa, uye kuzadzisa zvakawiriranwa muchibvumirano cheGlobal Political Agreement, zvinoratidza kuti Zanu-PF haina chido chekuita mushandira pamwe nevamwe muhurumende.
Vakati hurumende iri kutadza kuita zvayakaumbirwa, kwete nepamusana pekushaya nguva, asi kuti nepamusana pekunonoka kwayo kuvandudza zvinhu zviri kupingaidza nyika mukufambira mberi, zvose izvi zvichikonzerwa neZanu-PF.
VaTsvangirai vakati kuti nyika ienderere mberi, panofanirwa kuva nehurongwa hwa 2011 hwakajeka, hurongwa hwesarudzo dzinoitwa nenzira kwayo inotambirwa nemunhu wese.
Vakakurudzira vanhu kuti vavatsigire muchirongwa chavo chekukurudzira pasi rose kuti rione kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena. VaTsvangirai vakatiwo vanhu ngavapinde mugore ra 2011, vachiziva zvipingaidzo zviri munyika, asi vachiratidza kushinga kuti vachaita zvose zvavanogona kuita, kuitira kuti Zimbabwe ive nyika ine runyararo neremangwana rakanaka.
VaTsvangirai vakati zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zviri kuda kuona remangwana rakanaka munyika yavo yechizvarwa, uye vazhinji vavo vanoda kudzokera kumusha.
Vakatiwo kanawo vari munyika, avo vakaoneswa nhamo nehudzvanyirir kwemakore akawanda, vari kudawo kuona Zimbabwe itsva, yavanogara vasingatye, uye vaine tariro yakanaka muhupenyu hwavo.
Mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti MDC ndiyo iri kukonzera mhirizhonga.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaTrevor maisiri, vanoti zviri kutaurwa naVaTsvangirai ichokwadi.